မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Free & Easy Korea Trip Day3(Part 1): Korean Folk Village
Free & Easy Korea Trip Day3(Part 1): Korean Folk Village
၁၁ရက် ဂျူလိုင် ၂၀၁၄ (သောင်္ကြာနေ့)
ပေးထားတဲ့ သံပတ်တွေမြည်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ပိတ်ပြီး ခဏလောက်တော့ အိပ်လိုက်ပါသေးတယ်… နောက်တော့လဲ အပျင်းကြီးနေလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်… မိန်းကလေး ၃ယောက်ဆိုတော့ ရေချိုးခန်းသုံးတာ ကြာမှာလေ… တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက် စောစောထမှကို ဖြစ်မှာ… ပြီးတော့ မှန်ကလဲ မျှသုံးရအုံးမှာ… ရေချိုးခန်းက ဘေစင်မှာ မှန်တစ်ချပ် အခန်းထဲမှာ မှန်ဝိုင်းလေး တစ်ချပ်ပဲရှိတယ်… ရေမိုးချိုးပြီးတော့ ၈နာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့မှ တည်းခိုခန်းက ကျွေးတဲ့ မနက်စာသွားကြည့်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့ ၂ယောက် အပြင်ဘက်ထွက်လာကြတော့ မနက်စာစားတဲ့ စားပွဲနဲ့ မီးဖိုလေးမှာ ပေါင်မုန့်နဲ့ နွားနိုးကရားရယ်၊ Coffee Mix ထုတ်တွေရယ်၊ Corn Flakes ဘူးရယ်ကလွဲလို ဘာမှလဲမရှိဘူး… ကြက်ဥတွေနဲ့ မီးဖိုပေါ်မှာ အိုးရှိတယ်… မနေ့ညက ချက်အင်ဝင်တုန်းက ဘိုမ ကောင်တာမှာထိုင်နေပေမဲ့ ကျွန်မတို့ကို ဘာမှလဲ လာမပြောဘူး… သူ့ကိုပဲ ကြက်ဥကြော်ခိုင်းရမလား… ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြော်စားရမှာလား…
မနက်စာ အပြင်အဆင်လေးကတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိပါတယ်...
ကိုယ်က ပေါင်းမုန့် ဂျင်သုတ် သူငယ်ချင်းက နွားနို့နဲ့ Corn flake စားဖြစ်တယ်...
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြော်စားရတဲ့ တည်းခိုခန်းတွေ့ဖူးတာ ဒါပထမဆုံးပါ… ကြက်ဥမကြော်တတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး… ၁ အချက်က လုပ်ခွင့်ရှိမရှိမသိတာ…အဲ့ဒိမှာ ကြက်ဥကြော်တာ self service ပါ စာတမ်းထောင်ထားရင်တော့ တမျိုးပေါ့… ၂ အချက်က အပန်းဖြေဖို့လာတာ မနက်စာကအစ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဟုတ်သေးပါဘူး… ၃ အချက်ကတော့ အပင်ပန်းခံ ကြက်ဥကြော်ပြီးတော့ရော ကိုယ့်အတွက် ဖူလုံတင်းတိမ်တဲ့ မနက်စာဖြစ်မှာလား… ဝေခွဲမရအောင်ပဲ… အဲဒိအချိန်မှာပဲ Reception နောက်ခန်းမှာနေနေတဲ့ ပြည်ကြီး တရုတ်မ ၄ယောက်ကထွက်လာပြီး ကြက်ဥကို ကြော်ကြတော့တာ… သူတို့ကြော်တော့… “အင်း… ဒါဆို ငါတို့လဲ ကြော်ကြည့်မယ်လေ.. သူတို့က ၄ယောက်ဆိုတော့ ကြက်ဥ ၄လုံးကြော်တာ ဘယ်လောက်မှ မကြာပါဘူး” လို့တွေးမိတာပေါ့… ဒါပေမဲ့ ကြည့်နေတယ်… ၄လုံးကြော်ပြီးလဲ မပြီး ၅ လုံးကြော်ပြီးလဲ မပြီး… အဲလောက် ကြက်ဥကြော်ကြိုက်နေလဲ တစ်ခါတည်း ၂လုံး ပေါင်းကြော်ပေါ့… သိတဲ့အတိုင်း ပြည်ကြီးမတွေဆိုတော့ သူတို့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့… သူတို့မှာ သူများကို အားနာတယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးလေ… ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့လဲ စားချင်စိတ်မရှိတော့တာနဲ့ “တော်ပြီ အပြင်ရောက်မှ တွေ့တဲ့မုန့်ဆိုင်စားမယ်… တည်းခိုခန်းက စီစဉ်ထားတဲ့ မနက်စာဆိုတာကလဲ ဘာမှ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ လိုကယ်စာပဲ စားတော့မယ်” ဆိုပြီး ကော်ဖီဖျေ်ာပြီးပဲ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်နေလိုက်တယ်…
Getting to Korean Folk Village (Suwon Palace)
ကျွန်မတို့ တည်းခိုခန်းက ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘာရယ်မဟုတ် အချိန်က ၁၁နာရီထိုးနေပါပြီ။ အခန်းထဲမှာ wifi သုံးလိုက် စကားများလိုက်နဲ့ အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိလိုက်ပါ… အချိန်က နေကျဲကျဲတောက်ပူနေတဲ့အချိန်အပြင်ထွက်ရတာပေါ့… မနေ့ညက တည်းခိုခန်းကို ၀င်လာတဲ့လမ်းအတိုင်း တည်းခိုခန်းခြံဝကနေ ညာဘက်ကိုချိုး၊ တောင်ကုန်းကိုတက်၊ အပေါ်လမ်းမပေါ်ရောက်တော့ ရထားဘူတာနဲ့ တူတာကို မတွေ့မချင်းလမ်းလျှောက်တော့တာပေါ့… တပတ်ကြီးလျှောက်ခဲ့ရတယ်… အဲဒါတင် အချိန်က မိနစ် ၂၀လောက်ကုန်၊ လူလဲပင်ပန်း၊ စိတ်ထဲတော့ ထင်နေတယ် review တွေထဲမှာ ရထားဘူတာနဲ့ရော Myeong Dong နဲ့ရော နီးနီးလေးလို့ သူများတွေရေးထားကြတယ်လေ… ခုကျ ဒီလောက်ဝေးနေတယ်ဆိုကတည်းက ကိုယ်တွေ လမ်းမသိလို့ပဲနေမယ်လို့ထင်နေတယ်… နောက်အချိန်ရမှ ထပ်ပြီး Explore ရမယ်လေ… ခုတော့ နောက်ကျလို့ နေ့ဝက်ကျိုးနေပြီ… ရထားဘူတာတွေ့တော့မှ Gangnam ဘူတာကို ရထားစီးကြတယ်… ဘူတာရုံတွေမှာ ပလက်ဖောင်းရှာရတာ နည်းနည်း ရှုပ်ပါတယ်… သူတို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေက အင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ရေးပုံရေးနည်းက စကာင်္ပူဆိုင်းဘုတ်စတိုင်ပဲ ကြည့်နေကျ ကျွန်မတို့အတွက် သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး… စကာင်္ပူမှာဆိုရင် ဂိတ်ဆုံး နှစ်ဖက်ကိုရေးထားတာပါ… ပြီးတော့ ပလက်ဖောင်းက အလယ်မှာဖြစ်ပြီး ရထား အသွားနဲ့ အပြန်က ပလက်ဖောင်းရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုတော့ ရထားမှားစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပလက်ဖောင်းမှားဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟိုဘက်ပလက်ဖောင်းကို ပြန်ပြောင်းစီးလိုက်ရုံပါပဲ… ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယားကျတော့အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး… သူတို့လိုင်းတွေက များလွန်းတော့ စလုံးလို လုပ်လိုမရတာလားတော့ ကျွန်မလဲ သေချာမပြောတတ်ပါဘူး… ဂျပန်တုန်းကလဲ လှေကားမှားဆင်းရင် ပြန်တက်ပြီး အမှန်ပလက်ဖောင်းကို ပြန်သွားရတယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုရီးယား ဆိုင်းဘုတ်ရေးနည်းက ကျွန်မအတွက်တော့ ပိုစိတ်ရှုပ်ရတယ်ထင်တာပါပဲ…
ကိုရီးယား MRT ပလက်ဖောင်းတွေက ကိုယ်စီးရမဲ့ လိုင်းကို ပြတာမှာ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ ဘူတာရဲ့ ရှေ့တဂိတ် နောက်တစ်ဂိတ်ကို ရေးတာပါ… တစ်ခါတစ်လေ ရှုတ်တာက နောက်တစ်ဂိတ်က interchange လို ဂိတ်ဖြစ်နေရင် ဘယ်ဘက်ကို စီးရမလဲဆိုတာကို အရောင် (colour) အလိုက်ရော… တခြား စုံစိနေအောင်ရေးထားတဲ့ ဂိတ်နာမည်တွေရောကို သေသေချာချာလိုက်ဖတ်မှရမယ်… ပြီးတော့ ပလက်ဖောင်းမှားဆင်းမိလို့ကတော့ အဲဒိကနေ ဘယ်လိုပြန်သွားရမလဲ စဉ်းစားတာထက် အပေါ်အထိပြန်တက်ပြီး အစကနေ ဘယ်လိုသွားမလဲစဉ်းစားတာက ကျွန်မတို့ ခရီးသွားတွေအတွက် ပိုလွယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်… ပထမဆုံး ဆိုလ်းရထားစီးဖို့ အရှာ ကျွန်မတို့ ပလက်ဖောင်းမှားဆင်းကြသေးတယ် (ကျွန်မရဲ့ စိတ်မြန်တဲ့ အမှားတွေပေါ့… တိကျသေချာတဲ့ သူငယ်ချင်းက ဆိုင်းဘုတ်တွေကို သေချာကြည့်ပြီး ဖတ်နေတုန်းရှိသေးတယ်… ကျွန်မက ငါတို့သွားမဲ့ ဘက်က ဘူတာကိုတွေ့ပြီ အဲ့ဒါပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ကျန်တာနဲ့ မယှဉ်တော့ပဲ ဆင်းလိုက်လို့ မှားသွားတာပါ) ပြောမဲ့သာပြောတာ ကျွန်မခုထက်ထိ ကိုရီးယား ဘူတာတွေရဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို သေသေချာချာ မကြည့်တတ်ခဲ့ဘူး… ဘူတာရုံကြည့်တာကို အစ်မနဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း တာဝန်ပေးထားလိုက်တယ်… ကျွန်မတာဝန်က overall ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာပဲ… အဲဒိနေ့က ကျွန်မတို့ရဲ့ T-Money card ကို နောက်ထပ် ပိုက်ဆံ ၀မ် ၁သောင်းထပ်ဖြည့်ခဲ့ဖြစ်တယ်...
Seoul ကို ကျွန်မ Reserch ကောင်းကောင်းမရှာဖြစ်ခဲ့ဘူး… တော်သေးတယ်… ကျွန်မသူငယ်ချင်းကတော့ သူသွားချင်တဲ့နေရာတွေကို အကြမ်းဖျင်း စာရင်းလုပ်လာတယ်… ကျွန်မသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုတော့ ခေါင်းထဲမှာ အကြမ်းဖျင်းသိတယ်… ကျွန်မကို ကိုဖေစစ်နိုင်က Suwon နန်းတော်နဲ့ Everland က လမ်းကြုံတယ်ဆိုလို့ အဲ့ဒိ ၂ခုကို တူတူသွားမယ်ဆိုပြီး စုလိုက်တာ… အဲ့ ၂ခုနဲ့တင် တစ်နေကုန်မှာ သိနေတယ်…
Take bus from either Gangnam Station (Seoul Subway Line 2), Exit 10 or Sinnonhyeon Station (DX Subway Line), Exit 6.
ဒါပေမဲ့ Gangnam ဘူတာကနေ ထွက်လာပြီး ဘာ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှ မတွေ့လို့ လူက ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ပြီး ဟိုရပ်ရှာ ဒီရပ်ရှာနဲ့ အချိန်နည်းနည်းထပ်ကုန်သွားပါသေးတယ်… အမှန်တော့ အဲဒိ အပေါက်ကနေ ထွက်လာပြီး မရပ်ပဲတည့်တည့် ကားဂိတ်မတွေ့မချင်းဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင် ၅ မိနစ်လောက်ပဲလျှောက်ရမယ်ထင်ပါတယ်… ဘတ်စ်ကားဂိတ်က သိသာပါတယ်… တိုးရစ်တွေတော်တော်များများလဲ တန်းစီနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်… အဲဒိမှာ Korean Folk Village ကိုသွားတဲ့ကား 5001-1 ရော၊ Everland နဲ့ CaribbeanBay ကို သွားတဲ့ကား 5002 ရော တွေ့ရပါလိမ့်မယ်… သွားတဲ့နည်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်… Suwon ဘူတာကနေ Free Shuttle Bus စီးလို့ရတယ်လို့လဲတွေ့ပါတယ်…
[Shuttle Bus 1] (Korean Folk Village ↔ Suwon Station)
Suwon Station → Korean Folk Village: 10:30, 12:30, 14:30
Korean Folk Village → Suwon Station: 14:00, 15:30, 16:30
*Group passengers require reservation in advance.
*Tickets must be purchased prior to boarding. Inquiries regarding ticket purchase will be answered at the tourist information center.
ပိုသိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ (Visitkorea website) သွားဖတ်ပါ…
Bus Stop က ကိုရီးယားလို ချည်းပဲ...
Gangnam မှတ်တိုင်က အစိမ်းရောင်လေးပြထားတယ်... ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ကားက ဘယ်ဘက်ကို သွားနေတာလဲ မသိ...
ကားက Korean Folk Village ကိုရောက်ဖို့ ၁နာရီ လောက်တော့ စီးရမယ်ထင်ပါတယ်… ဘယ်ဂိတ်ဆင်းရမလဲတော့လဲ သေချာမသိပါ… ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာပြထားတဲ့ မှတ်တိုင်နာမည်တွေက အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပေမဲ့ Gangnam မှတ်တိုင်က အလည်နားမှာဆိုတော့ ကားရဲ့ လားရာက ဘယ်ဘက်လဲ မသိပါဘူး… ဒီတော့ ဘယ်နှစ်ဂိတ်ဆိုတာရေတွက်လို့ မရပါဘူး… မှတ်တိုင်နာမည်တွေကလဲ ဆင်တူတွေပါ… တစ်ချို့မှတ်တိုင်ကျတော့ KoreanFolk တဲ့ တစ်ချို့မှတ်တိုင်ကျတော့ Suwon တဲ့… အဲ့ဒိမှတ်တိုင် ၂ခုကလဲ တစ်နေရာစီ… ဘာမှန်းကိုမသိ ယောင်ဝါးဝါးပေါ့… တော်တော်လေးစီးတာ ကြာတော့မှ ကားသမားကိုမေးတော့ သူပြောမယ်တဲ့… တနေရာရောက်တော့ ကျွန်မတို့ကို ချခဲ့ပါတယ်… နေပူကျဲတဲ လမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာပါ… ဒါနဲ့ပဲ ကားလမ်းကူးပြီး 7/11 မှာ ရေ၀ယ်ပြီး ကိုယ်ထင်တဲ့ဘက်လျှောက်လာတော့ အ၀င်ဂိတ်ကို တန်းရောက်ပါတယ်…
ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းဆင်းချင်း ဂိတ်ကနေ မြင်ကွင်း...
၀င်ကြေးက ပုံမှန် ၁ယောက်ကို ၀မ် ၁သောင်းခွဲပါ… ကျွန်မတို့က မလာခင် Discount Coupon (Discount coupon အကြောင်းဒီမှာဖတ်လို့ရပါတယ်) တွေ Print ထုတ်လာတော့ ၁ယောက်ကို ၀မ် ၁သောင်းနဲ့ ရပါတယ်… သူတို့ လူမျိုးတွေတောင် ၁သောင်းခွဲပေးတာတွေ့ပါတယ်…
UNESCO က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် Suwon ခံတပ်တံတိုင်းကြီးနဲ့ Korean Folk Village က တိုက်စီနဲ့သွားရင် ၀မ် ၃၀၀၀လောက်ပဲကျတယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ မဗေဒါတို့တွေထွက်လာတာ နောက်ကျတာကြောင့် အချိန်မရလိုက်ပါဘူး… အဲဒါကြောင့် စာဖတ်သူတွေကို အထူးသတိပြုစေချင်တာက KFV, Suwon နန်းတော် (ခံတပ်တံတိုင်းဟောင်း), Everland ကိုသွားမယ်ဆိုရင် တည်းတဲ့နေရာကနေ မနက် ၈နာရီလောက် နောက်ဆုံးထားပြီး ထွက်မှရပါမယ်… လမ်းလဲ လျှောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးတွေနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ၁နေ့လုံးမှ ၁နေရာသွားဖို့ စီစဉ်ရမယ်ထင်ပါတယ်…
Discount Coupon တွေ ထုတ်လာတာ ဟန်ကျတယ်... ၀မ် ၁သောင်းပဲပေးရတယ်...
အစက အဲဒိ Korean Folk Village ကို သိပ်မကြီးဘူးထင်တာ… စုစုပေါင်း ၂၄၃ ဧကရှိပြီး ရိုးရာအိမ်ပေါင်း ၂၆၀ ကျော်တည်ဆောက်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်… Joseon ခေတ်မှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အနေအထိုင် အ၀တ်အစားနဲ့ အိမ်ပုံစံမျိုးစုံကိုဆောက်လုပ်ပြသထားပါတယ်… ဒါ့အပြင် လက်တွေ့ဝင်ရောက် လုပ်ဆောင်လို့ရမဲ့ Workshop တွေလဲရှိပါတယ်.. (ဥပမာ… အိုးလုပ်တာ၊ ၀ါးနဲ့ တောင်းယပ်တာ၊ ရိုးရာတူရိယာတွေလုပ်တာ ဘာညာပေါ့) အထဲမှာ တော်တော်လေးကျယ်ပြီး ဧရိယာတစ်ခုကို တစ်ကန့်နဲ့ အကန့်လိုက် အကန့်လိုက်ထားရှိထားပါတယ်… ညာဘက်ကိုကွေ့ရင်လဲ ကလေးတွေအကြိုက် ကစားကွင်းမျိုးနဲ့ ရောယှက်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးလဲတွေ့ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ခရီးဖော်သုံးယောက်သားကလဲ ကလေးဆို ဝေးဝေးရှောင်တဲ့ ၃ယောက်ဆိုတော့ အဲ့ဒိဘက်ကို လုံးဝမသွားတော့ပါဘူး… ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာကို ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တစ်နေရာရောက်တိုင်း အဲဒိက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတော့ အဲဒိမှာ ပျော်နေတော့တာပဲ…
Jewel in the Palace, Queen SongDeok, SongKyungKwan scandal, The King and I, HwanJinYi, The Moon embraced the Sun, My love from another stars စသည့်ဖြင့် အရင်ခေတ်ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်ရင် သုံးတယ်ထင်ပါတယ်… နေ့လည် ၁၁နာရီကနေ စပြီး Show ပွဲမျိုးစုံကို အချိန်စာရင်းနဲ့ပြသပါတယ်… စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်…
အဲ့ဒိနေရာကို ရောက်ရောက်ချင်း နေ့လည် ၁နာရီထိုးနေပြီ လူက မနက်စာလဲ ကောင်းကောင်းမစားခဲ့တော့ တော်တော်လေး ဗိုက်ဆာလာပါတယ်… ဒါနဲ့ အဲ့ဒိ ၀န်းထဲမှာရှိတဲ့ ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေကိုပဲ ၀င်စားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်… ခုလို Tourist Attraction နေရာလဲဖြစ် ရောင်းတဲ့သူတွေကလဲ ဟန်ဘုတ်တွေဘာတွေဝတ်ပြီး အကျအနရောင်းတယ်ဆိုတော့ ဈေးကြီးမယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ ဈေးက ပုံမှန်ပါပဲ…
၀တ်စုံတွေ ၀တ်ချင်ရင် ရှိတယ်...
အရသာကလဲ ကိုရီးယားအရသာစစ်စစ်ကို စားရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်… အဲဒိမှာ စားခဲ့တဲ့ Korean Pancake ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ… ၂၀၁၀ တုန်းကလဲ စားဖူးတယ်၊ စလုံးမှာလဲ စားဖြစ်တယ်… သိပ်မကြိုက်ခဲ့ဘူး… ဒါပေမဲ့ KFV ကဆိုင်မှာစားခဲ့တဲ့ Korean Pancake ကတော့ အတော်လေးကောင်းပါတယ်… ကျွန်မကတော့ Bibimbap ကြိုက်တဲ့သူပီပီ… အဲဒါကို တန်းမှာလိုက်တာပါပဲ… အစ်မနဲ့ သူငယ်ချင်းလဲ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒါပဲလိုက်မှာပါတယ်… မြေအိုးပူနဲ့ တကယ့် ကိုရီးယားစတိုင်စစ်စစ်ပါပဲ… ဗိုက်ဆာနေလို့ပဲလားတော့ မသိဘူး စားကောင်းလိုက်တာ မပြောပါနဲ့… ကြက်သွန်မိတ်ကို ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ နယ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ ချဉ်ဖတ်က ထုတ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့အတော်လေး စားကောင်းပါတယ်... လပ်ဆပ်တယ်ဆိုတာလဲ သိသာပါတယ်... တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်မ အရင်က မကြိုက်တဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံလုံးကြိုက် ဂေါ်ဖီထုတ် ကင်ချီပြောရမလား... ကိုရီးယားမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ကင်ချီကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စားလို့ရလာပါတယ်... (ခုတော့ ကြိုက်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အဆင့်ဖြစ်နေပါပြီ)... Bibimbap ဆိုတာကို အားလုံးသိကြမှာပါ… သူက မြေအိုးပူထဲမှာ ထမင်းနဲ့ အရွက်တွေ အသားတွေ ငရုတ်သီးတွေနဲ့ ရောနယ်ပြီးစားရတာပါ… ကြက်ဥကြော်လဲပါပါတယ်… ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာဆို မင်းသမီးတွေ ညဘက် ဗိုက်ဆာရင် ထထစားတဲ့ အရာပေါ့ (အဲဒါတွေသာ တကယ် ညဘက် ထစားကြည့်ပါလား… လူက အိမ်ပေါက်ဝနဲ့တောင် ဆန့်မှာမဟုတ်ဘူး)… အဲဒိမှာ စားတာ တစ်ယောက်ကို ၀မ် ၁သောင်း ၂ထောင်ကျော်ပဲကျပါတယ်… Bibimbap ကတော့ တစ်ပွဲ ၀မ် ၈၀၀၀ ထောင်ပါ… အပြင်(Myeong Dong) မှာလဲ ဒီဈေးပဲ…
စားဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံး Korea Pan Cake
Bibimbap ကလဲ ကောင်းမှကောင်း...
မစားခင်က ဗိုက်ဆာသည်၊ စားပြီးတော့ ပြည့်အင့်သည်နဲ့ ပျင်းရိခြင်း ၆ပါးမျိုးစုံဖြစ်နေတော့တာပါပဲ… ဒါပေမဲ့လဲ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်... ဈေးဆိုင်တန်း ထမင်းဆိုင် အကန့်တွေပြီးတော့ နောက် ခြံစည်းရိုးတစ်ခုထဲမှာကျတော့ ဟိုးအရင်က လူအတန်းအစား၊ နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးနေထိုင်တဲ့ အိမ်ပုံစံငယ်မျိုးစုံးကို ၀န်းခြံအလိုက်ပြသထားပါတယ်... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မအတွက် စိတ်အ၀င်စားဆုံးနေရာတွေကတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖူးတဲ့နေရာတွေပါ... စစချင်း အဲ့ဒိဝန်းထဲ ၀င်လိုက်တာနဲ့ တွေ့တာက Jewel in the Palace (ချန်ဂင်) ကားရိုက်တဲ့နေရာပါလို့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတဲ့ နေရာကိုရောက်ပါတယ်... အဲဒိက ပိတ်စရောင်စုံတွေ သစ်ပင်ပေါ်ကနေတွဲလွဲကျနေတဲ့ တော်အုပ်လမ်းလေးက ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆို မြင်းတွေစီးပြီး ရဲမက်တွေ လိုက်လာတဲ့ အခန်းမျိုးတွေနဲ့ တူပါတယ်...
စားသောက်ဆိုင်အကန့်ကနေ ဆက်ဝင်ရင် နောက်ထပ် စည်းရိုး အ၀င်ဂိတ်ရှိတယ်... (ကောင်တာမှာလဲ မြေပုံပေးတယ်)
အပေါ်က ဂိတ်ထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ စစတွေ့ရတာ ချန်ဂင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းဆိုတဲ့ နေရာ...
တိုင်လေးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖတ်ကြည့်နော်... အတိုချုံးပြောရရင်တော့ အဲဒိရွာလေးရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတွေ ကောင်းမွန်ပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတွေရန်က ကာကွယ်အောင် ရွာအ၀င်ဝတွေမှာ ထောင်ထားလေ့ရှိပါတယ်တဲ့..
အောက်မှာတွေ့ရမှာကတော့ တောင်ပိုင်းမှာနေတဲ့ ဆင်းရဲသားလူတန်းစားတွေ နေတဲ့အိမ်ပေါ့...
အလုပ်ခန်း၊ အိမ်သာ၊ အိပ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ဗိုင်းငင်... ထင်တာပဲ... အခန်းလေးတွေက အရမ်းကျဉ်းတယ်...
ရွာအိမ်လေး တစ်အိမ်နဲ့ အမှတ်တရ...
SungKyungKwan Scandal ရိုက်တဲ့ အိမ်နားမှာလဲ ကျွန်မတို့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်... အဲဒိမှာက lifesize ပိုစတာထောင်ထားပေးတယ်လေ... မင်းသားသုံးယောက်မှာ ဘယ်သူနား ရပ်ရိုက်ရမလဲ ဝေခွဲလို့မရအောင်ပဲ... ဒါပေမဲ့လဲ photospot က Yoo Chun နောက်မှာတက်ရပ်ဖို့ပဲရှိတော့ အဲ့ပေါ်ပဲ ရပ်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့... Yoon Chun မျက်နှာကတော့ ဘယ် Fan တွေ ဘယ်လောက် ကိုင်သလဲ မသိဘူး ပါးနားမှာ ဆေးတောင်ပျက်နေပြီ... ကိုယ်လဲဘယ်လို ပုံစံရိုက်ရင် စိတ်တိုင်းကျမလဲ ကြိုးစားရင်း ကြိုးစားရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဒီလိုပဲရိုက်ခဲ့တာပေါ့...ခွိ.... (စိတ်ပုတ်တာလေ)...
Seonggyungwan Scandal ရိုက်တဲ့ နေရာရောက်ပြီ....
ဒီလိုပဲ တို့ကတော့... မဗေဒါလက်ထဲက ဖိုင်က Discount coupon တွေ အထပ်လိုက်ထည့်ထားတာ...
ဒီနေရာက မင်းသားကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ လိုက်ကြိုက်တဲ့ သူဌေးသမီး ပန်းထိုးတဲ့နေရာ...
ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ... သူတို့နေတဲ့ အဆောင်နဲ့တူလို့ ရိုက်လာတာ... ဘာပဲပြောပြော ဒီတိုင်ကို Yoo Chun မှီဖူးရင် မှီဖူးခဲ့မှာ... ခွိ...ခွိ...
ဒီဖက်လုံးက တော်တော် ဖက်အိပ်လို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲ...
The man from Stars မှာ မင်းသားအရင်ခေတ်က အခန်းတွေရိုက်တဲ့ အိမ်မှာတော့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်က မြက်ဖိနပ်တွေ ယက်နေပါတယ်... ၁ယံကို ၀မ် ၁သောင်းနဲ့ရောင်းပါတယ်... အဖိုးအိုကို သနားပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်လဲ အသုံးမ၀င်တော့ မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး... အဲဒိကနေ ဆက်လျှောက်ရင်တော့ မြို့ဝန်တွေ အကြီးအကဲတွေနေတဲ့ အိမ်လို့ရေးထားတဲ့ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ကျွန်မကတောင် "ဒါက လူဆိုးတွေနေတဲ့အိမ်" ဆိုပြီး ပြောရုံပဲရှိသေးတယ်... နောက်မှ ရိုက်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင် အခန်းပုံတွေကပ်ထားတော့မှ မင်းသား မင်းသမီးပေါင်းစုံ နှိပ်စက်မတရာစွပ်စွဲခံရတဲ့ အခန်းမျိုးတွေရိုက်တာပေါ့... ခြံဝန်းထဲမှာလဲ စစ်ဆေးရင် ညှင်းပန်းတဲ့ ထိုင်ခုံတွေဘာတွေ ပြသထားပါတယ်... တခြား တိုးရစ်တွေရှိနေတာရော နေပူတာရောကြောင့် လူမပါပဲ ဟိုရိုက်ဒီရိုက် ခဏလုပ်ပြီး ထွက်လာလိုက်ပါတယ်...
Do Manager မပါရင် ဘယ်ပြီးမလဲနော်...
အဘိုးအို ယက်တဲ့ ဖိနပ်...
Kim Soo Hyun လေး ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်.... သူ့အငွေ့အသက်တွေ လတ်ဆပ်နေဆဲ...
အစိုးရ အမှုထမ်း မြို့ဝန်ကြီးတွေရဲ့ ရုံးပေါ့...
အဲ့ဒိရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာတော့ ဖျော်ဖြေရေး နေရာရှိပါတယ်... တီးလုံးသံတွေ လက်ခုပ်သံတွေ ကြားနေရတာနဲ့ အဲ့ဒိဘက်ကို လျှောက်သွားကြည့်ပါတယ်.... မြင်းပေါ်ကနေ ဓားခုတ် လှံခုတ်... မြင်းကို ဇောက်ထိုးစီး၊ အတည့်စီး၊ ဘေးတိုက်စီး၊ ပက်လက်စီး၊ မတ်ရပ်စီး မျိုးစုံပဲ ဖျော်ဖြေပါတယ်... ကောင်မလေးတွေလဲဖျော်ဖြေသူတွေထဲပါပါတယ်... ၀င်ကြေး ၁သောင်းနဲ့ ဒီလိုဖျော်ဖြေရေးတွေပြတာ တန်တယ်လို့ ကျွန်မကတော့ ထင်ပါတယ်... ကြည့်တော့သာ အရမ်းမထူးဆန်းချင် မထူးဆန်းသလိုလို၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်ဖူးနေလို့ အမြင်မဆန်းဖူးဘူးဆိုရင်တောင် ဒါမျိုးကို လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတာ သူတို့ အတော်လေး လေ့ကျင့်ထားရမှာဖြစ်သလို တစ်ခုခုဆို သူတို့ ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ပါတယ်... အဲဒါကြောင့် သူတို့ Performace ကို ကျွန်မ တန်ဖိုးထားပါတယ်...
အဲဒါ ကောင်မလေးတွေ... အရမ်းတော်တယ်...
ကျွန်မတို့ အဖွဲ့လဲ ညနေ သုံးနာရီထိုးနေပြီမို့ Everland ကလဲ အချိန်ကြာအုံးမှာဆိုတော့ အချင်းချင်းလောပြီးတော့ပဲ ပြန်ဖို့ဆိုင်းပြင်းလိုက်ပါတယ်... ဖျော်ဖြေရေးလဲ အဆုံးထိမကြည့်တော့ပါဘူး... အဲဒိနားမှာပဲ The Kind and I ရိုက်သွားတဲ့ ကြိုးတန်းလျှောက် အစွမ်းပြတဲ့နေရာရှိပါတယ်... ကြိုးတန်းလျှောက် အစွမ်းပြဖျော်ဖြေရေးတွေလဲ အချိန်ဇယားအလိုက်ရှိတယ်လို့တွေ့ပါတယ်.. (ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒိနေရာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ၁ရက်ပေးပြီးတောင် သွားရင်တော့ အေးဆေးနဲ့ထောင့်စေ့မှာပါ)... ဒါနဲ့ အ၀င်ဘက်လမ်းက မထွက်ပဲ တစ်ပတ်ပြည့်အောင် တစ်ဖက်ကလမ်းကထွက်လာကြပါတယ်... အိမ်တော်တော်များများကိုတော့ အတန်အသင့်ပဲ အပြင်ကကြည့်လိုက်ပါတယ်... အိမ်တစ်အိမ်ရောက်တော့ အရင်ခေတ်က ခပ်ချမ်းချမ်းသာသာအသိုင်းအ၀ိုင်းမျိုးနေတဲ့ အိမ်မျိုး၊ ကိုယ်လဲ အဲဒိအိမ်ကို တရင်းတနှီးမြင်ဖူးသလိုဆိုတော့ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ အဲဒိအိမ်က Moon Embrace the sun က မင်းသမီးနေတဲ့အိမ်ဖြစ်သလို၊ Hwan Jin Yi မှာ Jang Keun Suk နေတဲ့ အိမ်ပါပဲ... အထဲမှာ အဲဒိအိမ်ရဲ့နေရာတွေမှာ ရိုက်သွားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားပါတယ် (ဒါနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေက အားလုံး ကိုရီးယားလိုပဲရေးထားတာပါ... ကိုယ်ကသာ ကိုယ်ကြည့်ဖူးတဲ့ကားတွေမို့ ပုံကြည့်ပြီးသိတာပါ)...
The King and I က ကြိုးတန်းလျှောက် ပြပွဲရိုက်တဲ့နေရာ...
ဂျန်ဂမ်ဆပ်ကို သေးသေးလေးတွေ့လဲ မှတ်မိတယ်...
Han Ga In ပုံတော့ရှိတယ်... ဂျန်ဂမ်ဆပ်ပုံတော့ မရှိဘူး... :(
အဲဒိ ၀န်းခြံထဲက အိမ်တော်တော်များများက တော်တော်လေးရင်းနှီးပါတယ်... Tamna The Island ရိုက်တဲ့ အိမ်လဲတွေခဲ့ပါတယ်... ဘယ်ဝန်းထဲမှာတွေ့ခဲ့သလဲတော့ မမှတ်မိတော့ပါ... Tamna The Island ကို Jeju မှာရိုက်တယ်ထင်တာ တချို့အခန်းတွေကိုသာ အဲ့မှာရိုက်ပြီး ရွာခန်းတွေကို ဒီနေရာမှာ လာရိုက်တယ်ထင်ပါတယ်... အဲ့ဒိကားက ရှုခင်း၊ သီးချင်း နဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို ကြိုက်ပါတယ်.. (ဇာတ်သိမ်းက အလျင်စလိုသိမ်းသွားလို့ သိပ်အားမရတာပဲရှိပေမဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်... ဘာလို့ နာမည်သိပ်မကြီးလဲတော့ မသိပါ)... ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ Korean Folk Village ကနေ ပြန်ထွက်လာပြီး Everland သွားဖို့ Shuttle Bus ရှိတယ်ထင်တယ်လို့ နယ်ခံသူငယ်ချင်းက ပြောထားတော့ Shuttle bus အင်ဖိုကို မေးဖို့ Tourist Information center ထဲ ၀င်မေးပါတယ်... စကားပြောရလွယ်ကူပါတယ်.. tourist information center ကိုးးး.... အဲဒိက အမျိုးသမီးကို မေးတော့ Shuttle Bus Service မရှိဘူးတဲ့... အမြန်ဆုံးဆိုရင်တော့ သူ Recommend တာ တိုက်စီနဲ့ပဲ သွားလိုက်ပါတဲ့... ၀မ် ၂သောင်းခွဲ ၃သောင်းလောက်ကျမယ်ထင်တယ်တဲ့...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ တိုက်စီနဲ့ပဲ Everland သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်... တိုက်စီသမားကို Everland လို့ တစ်လုံးပဲပြောလိုက်တာနဲ့ သိပါတယ်... သူကလဲ တိုက်စီပေါ်မှာ စကားတွေများလိုက်တာမပြောပါနဲ့... သဘောတော့ကောင်းပါတယ်... ဒါပေမဲ့ သူသဘောကောင်းတာကျတော့ ဘူဆန်းကလို ဘာမှပြန် မမျှော်လင့်ပဲ သဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူး... အပြန်လဲ Everland ကနေ ဆိုလ်းကို သူ့ကားငှားပါလားလို့ ကျွန်မတို့ကို မေးတယ်... သူ့မှာက App ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်... အဲဒိ App က ကျွန်မ App လို one way မဟုတ်ဘူး...သူကိုရီးယားလိုပြောရင် အင်္ဂလိပ်လို Translate လုပ်ထားတဲ့ စာကြောင်းပေါ်တယ်... ကျွန်မတို့က အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောရင် ကိုရီးယားလို့ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာကြောင်းပေါ်တယ်... ဘာ App လဲတောင် မမေးခဲ့ရဘူး... ဒါပေမဲ့ ရပါတယ် အပြန်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ သူကလဲ အေးဆေးပါပဲ... သဘောဆက်ကောင်းပါတယ်... သူ့ကားမငှားတော့ဘူးဆိုပြီး ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံတော့တာတော့ မရှိပါဘူး... လမ်းမှာ ကျွန်မအစ်မက ဖုန်းနဲ့ ရှုခင်းပုံတွေရိုက်တော့ သူ့ကားကို နှေးပြီး မောင်းပေးတယ်... တိုက်စီ ငှားလိုက်တာ မှန်သွားပါတယ်... တော်တော်လေးဝေးဝေးမောင်းရတယ်... Everland Resort ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ့တာတောင် အထဲကို အကြာကြီးဆက်ဝင်ရပါသေးတယ်... ရောက်ခါနီးမှ ကားတစ်စီး ကို့လို့ကန့်လန့်လုပ်လို့ လမ်းပိတ်ပြီး ကြာသွားပါသေးတယ်... Korean Folk Village ကနေ Everland ဂိတ်ပေါက်တည့်တည့်ထိ တိုက်စီခ ၀မ် ၃ သောင်းကျပါတယ်...
ဒီဂိတ်ကိုတွေ့ပြီး နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀လောက်တောင်ထပ်မောင်းရတယ်ထင်တာပဲ...
Everland အကြောင်းကို နောက်ပိုစ့်ကျမှ ဆက်ရေးပါတော့မယ်... ဒီပိုစ့်ကို August မကုန်ခင် တင်ချင်အမှီရေးလိုက်ရပါတယ်... အသုံးဝင်တယ်ဆို Like and share on FB, ကြိုက်ရင် ကွန်မန့်၊ မှန်တာ မှားတာတွေ၊ မဗေဒါကို ဒီပိုစ့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးချင်တာတွေရှိရင် ကွန်မန့်သွားနော်... အင်္ဂလိပ်လို ကွန်မန့်လဲရပါတယ်...
A Cute Tree at Everland ... (Stay Tuned for Part 2)
Posted by mabaydar at 7:33 PM
ဟားဟား လမကုန်ခင်တင်မယ်ပြောလို့ ဘလော့ကိုလာလာကြည့်နေတာ မိပြီကွ.. သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ချစ်စရာလေးတွေ. အမပုံကျသိပ်မပါဘူးနော်.. မင်းသမီးပုံမပါအောင် ရိုက်လိုက်တဲ့ photo shoot idea ကိုကြိုက်သွားပြီကွယ်
9/01/2014 12:51 AM
Wine ရေ... ဘယ်သူများ အဲလို လာဖတ်မလဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မချင့်မရဲ မျှော်လင့်ခဲ့မိတာ.... Comment တွေ့တော့ အရမ်း ၀မ်းသာသွားတယ်... ကျေးဇူးနော်...
အမက သူ့ပုံတွေ တင်တာ သိပ်မကြိုက်ဘူး.... ဒါပေမဲ့ မလွှဲသာရင်တော့ မဗေဒါက တင်တာပဲ... အဲ့ဒါကြောင့် ဒီခရီးမှာ သူ့ဖုန်းနဲ့ပဲ မဗေဒါတို့ကို snap shoot တွေရိုက်ပေးတာများတယ်... အဲ့ဒါကြောင့် သူ့ပုံမပါတာ...
အမှန်တော့ သူငယ်ချင်းကလဲ သူ့ပုံတွေ သူ့ fb မှာတောင် မတင်ဘူး.... ကိုယ်ဒီမှာတင်တာတော့ သူဘာမှ မပြောပါဘူး... အဲ့ဒါကြောင့် တတ်နိုင်ရင် သူတို့ပုံတွေကို အရမ်းများကြီး မတင်ချင်တာ.... အမပုံတွေက Auzi trip ပိုစ့်တွေမှာ ပါတယ်လေ....
9/01/2014 10:15 AM
Folk village နဲ့ Everland က တော့ မြတ်ကြည် တို့မြို့မှာရှိတာဆိုတော့ ဘယ်သူလာလည်လည် အဲဒီပဲ လိုက်ပို့နေရတာ။ အလွတ်ကိုရရော။
9/01/2014 12:06 PM
9/01/2014 3:25 PM
မဗေဒါရေ။ ကိုယ်သွားဖို့ ရီရွယ်ထားတဲ့ အထဲမှာ Korean Folk Village လဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း ကိုရီးယားကား မကြည့်ဖြစ် သလောက်ပဲ ဆိုတော့ သွားပြီးနားမလည်မှာလဲ စိုးတယ်။ ကိုယ်က ရထားစီးရတာ စင်ကာပူ လိုပဲ အောက်မေ့နေတာ။ မဗေဒါရဲ့ ဒီ Post ဖတ်မိမှပဲ "အင်း။ ငါလဲ ဂိတ်ထဲ မဝင်ခင် သေချာကြည့်မှ ဆိုပြီး idea ရတယ်". Thank you... for your info... နောက်ထပ် သတိထားစရာတွေ ရှိရင်လဲ ကြုံသလို ရေးပေးပါအုံးနော်... :)
9/02/2014 4:45 PM
သွားပြီး နာမလည်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး... အမှန်တော့ အဲဒိနေရာတွေက ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ထက် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုကို ပြထားတဲ့ နေရာပါ... ဒီတော့ သွားရတာ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး.... Shin တို့သွားရင်သာ UNESCO record ၀င် ခံတပ်ကို တိုက်စီနဲ့ ရောက်အောင်သွားခဲ့အုံးနော်.... ရထားပလက်ဖောင်းကတော့ သတိထားပြီး ကြည့်ပေါ့... စလုံးနဲ့တော့ ကွဲတယ်... ကိုယ်လဲ မျှော်လင့် မထားခဲ့မိဘူး...
9/02/2014 6:42 PM
ဟီးဟီး ။ဒါဆို ၂နေရာလုံး သွားမယ်။ အခုထိတော့ ဟိုဟာ ဒီဟာ List နဲနဲ လုပ်ထားတာပဲ ရှိသေးတယ်။ အခုထိ အသေးစိတ် Plan ဘာမှ မဆွဲရသေးဘူး။ :D
9/03/2014 12:17 PM
မမဗေဒါက ဒီလိုမျိုးလေး သေချာရေးထားတော့ ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလိုပါပဲ
အရမ်း သဘောကျတယ်ရှင့် ... :)
9/08/2014 9:56 AM
Thanks for sharing, sis.. I have plan to go there as free and easy trip. Let me have your posts as my references and will prepare my itinerary based on your posts. Really appreciate it. Thanks alot. =)
9/09/2014 9:24 PM
@Anonymous - Thank you... Hope that my post is helpful to you. Day3Part2will be up soon.
9/09/2014 9:57 PM
Free & Easy Korea Trip Day3(Part 1): Korean Folk...
တစ်ခါက စာသင်ခန်း (သို့) စကာင်္ပူရောက်အလွဲများ (၁၃)
ကျွန်မချစ်သော CEO So Ji-Sub In Town!
Free & Easy Korea trip Day 2: Busan (Haeundae Beac...